လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်နိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ထင်ပါသလား?
PARTNERING WITH 17514288 U-REPORTERS
U-Report Myanmar ကို Facebook Messenger မှာ “𝐣𝐨𝐢𝐧” လို့ပို့လိုက်ပါ။ ဒီနေ့ပဲထူးခြားပြောင်းလဲမှုတွေကိုစတင်နိုင်ပါပြီ။
Poll Report: Better Cities for Children and Young People
A place where children and young people live and grow –acity, town or community – should present opportunities and hope forabetter life so that children can live, learn and thrive. But this is not always the case; inequalities are everywhere. The demographic shift of populations towards …